नेपाल प्रहरीलाई खुलापत्र: एन्काउन्टर गर्नुपर्नेलाई बर्दीमा स्लुट गर्न सुहाएन ! – Himalitimes
नेपाल प्रहरीलाई खुलापत्र: एन्काउन्टर गर्नुपर्नेलाई बर्दीमा स्लुट गर्न सुहाएन !
७ भदौ २०७२ को दिन, टिकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने र एक नाबालकसहित ८ जना प्रहरीहरुको विभत्स हत्या भएको थियो। म थाकिसके,मलाई छोडिदिनुहोस ।अलिकता दया गर्नुहोस, मेरो फौज तितरबितर भइसक्यो। मैले हारेँ तपाईँहरूले जित्नुभयो भन्दा पनि कसैको दया पलाएन। घरभित्र पसिसक्नु भएका सर (एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने)को कठालो समातेर बाहिर ताने, पर खेतसम्म लखेटे अनि धकेल्दै परसम्म लगेर लामो कपाल भएको जस्तो देखिनेले आँखामा भाला रोप्यो। सर त ड्याम्म ढल्नुभयो। उहाँको मुखमा, टाउकोमा हान्दै थिए ….!
भीड अनियन्त्रित भयो एसपी साप फायर खोलौं ? भनेर सापले धेरैपटक सशस्त्रका एसपी सापलाई भन्नुभयो तर उहाँले आदेश नआएकाले गोली हान्न नसकिने बताउनुभयो । सशस्त्र प्रहरीले फायर खोलेन, एकजना एसएलआर बोकेको सशस्त्र प्रहरीको जवान सरको छेउमै थियो । सरले भन्नुभयो, “ए भाइ फायर खोल, हामीसँग केही छैन, तिमीहरूले पनि फायर नखोले कसरी बाँच्ने हामी ? छिटो फायर खोल ।” तर ती जवानले आदेश नआएकाले गोली चलाउन नमिल्ने भन्दै टारे । त्यहाँ चार पाँच जना मात्रै हतियार भएका प्रहरी गएको भए भीड नियन्त्रणमा आउने रहेछ ।
माओवादी सशस्त्र युद्धको बेला जस्तै छापामार शैलीमा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको थियो टीकापुरमा । प्रहरीलाई लखेट्ने, एक्ल्याउने एक समूह हुन्थ्यो, घेर्न, हतियार हान्ने, भाला रोप्ने समूह अर्कै थियो । सबैलाई एक्ल्याएर मार्दै गए। प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरा पनि सापसँगै जानुभएको हो । सबैलाई सी आकारमा घेर्दै भाला रोप्दै, आगो लगाउँदै मारे।
टीकापुर घटनाले सारा देशमा अशान्तिको माहोल सृजना भयो । स्थानीय केही भारत पसे केही घरबाहिर निस्कन समेत सकेन्न । र यो घटनाको मुख्य योजनाकारमा रेशम चौधरीलाई लगियो ।तिनै रेशम चौधरी आज ब्यवस्थालाई नै भद्दा मजाक बनाउदै, कानूनी राज्यको उपहास गर्दै सभासद भए । र तिनै प्रहरी उस्लाई सुरक्षा दिदै स्यालुट गर्न वाध्य छन। तिनै मद्धे धेरैले यस घटनामा मारिएका प्रहरी सङ्ग धेरै पल्ट सङ्गै काम गरेका थिए होलान। धेरै अपरेसनमा सङ्गै साथ थिए होलान र धेरै पटक एउटै मेसमा खाना पनि खाएका थिए होलान।
तर प्रहरीको निरिहपन हो कि राजनैतीक प्रभाव, मलाई आज नेपाल प्रहरी सङ्ग सोध्न मन लाग्यो ,जो ७ भदौ २०७२ मा भएको टीकापुर घटनामा बाचेँका छन। त्यो घटनामा मारिएका सात जना प्रहरीको घर-परिवारलाई के भनेर मुख देखाउछौ ? उनिहरुको बिदवी श्रीमतीहरु लाई के जवाफ दिन्छौ नेपाल प्रहरी ? तिनका नाबालक छोरा-छोरीलाई कुन नसिहत दिन्छौ ? त्यो मारिएको नाबालकको माता-पितालाई कस्तो सुरक्षाको अनुभुती दिन्छौ ? त्यो सामुहिक नरसंहारको घटनाको मुख्य योजनाकारलाई कुन नैतिकताले स्यालुट हान्छौ?
टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा एक बालक र एसएसपीसहित ८ सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो। घटनाको भोलिपल्ट रेशम चौधरीको रेडियो तथा रेष्टुराँका साथै थारु बस्तीहरुमा तोडफोड तथा आगजनी भएको थियो। यस्को लगत्तै चौधरी भारततिर फरार बनेका थिए । तर फरार रहेको अबस्थामा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई भारत भ्रमणमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेटेका थिए । र डेढ करोड भन्दा बढी क्षतिपूर्ति समेत दिएको थियो। आज आएर अर्को प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रेशम चौधरी एमाले भएको हुँदा SOFT CORNER राखिने समेत बोलीसके। देशको गृहमन्त्री जुस पिलाउन अस्पताल जान्छ। अनी तिनै नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिएर सिंहदरबार ल्याउछ।
यस्तै घटना नेपालमा १० वर्ष चलाइएको थियो जसमा नेपाली जनता, प्रहरी अनी सेनालाई यसै गरी विभत्स रुपमा मारिएको थियो र त्यस्को मुख्य योजनाकार थिए गिरिजा, केपी, माकुने, प्रचन्ड, बाबुराम, महरा, शेरबहादुर, कमल थापा, लगायतका राजनैतीककर्मी अनी अधिकारवादी, बौद्धिक बर्ग र केही पत्रकार । जसले सत्ता र सम्पत्तीको लोभमा नेपाली जनता मार्ने र मराउने षड्यन्त्रको हिस्सेदारी गरेका थिए, नेपाल र नेपालीको दुर्दशा गराउने खल पात्र थिए र आजसम्म पनि छ्न।
यस्मा नेपाली जनतामात्रै मारिएनन, वर्दी लगाएका राष्ट्रसेवक प्रहरी र देशको रक्षा गर्ने सेना समेत निर्ममता पूर्वक मारिए। विश्वले “आतंककारी” घोषणा गरेको माओवादी बरबरतालाई राज्य पक्षले प्रतिकार गर्न र गराउन राष्ट्रसेवक हरुको प्रयोग गरियो जुन पछि आएर छर्लङ्ग भयो कि त्यो विदेशी र स्वदेशी नेता र केही वर्गको स्वार्थको लागि थियो भनेर।
शान्ति सम्झौता भनिएको कथित नाटक सिद्धी सकेपछि पनि माओवादी पक्षले धेरै नेपाली जनतालाई, प्रहरीलाई समेत निर्ममता पूर्वक मार्यो, पछि यस्लाई समेत राजनैतीक रङ्ग दिएर हत्यारा र अपराधीहरु लाई उन्मुक्ती दिने प्रपञ्च गरियो । आज अपराधीहरु खुलेआम घुम्छन भने, जनता त्रसित। प्रहरी तिनै अपराधी र हत्यारालाई सुरक्षा र संरक्षण दिन्छ मात्रै होइन, स्यालुट समेत ठोक्छ। किन?
प्रहरीको काम त अपराध र अपराधीलाई सिद्ध्याउने होइन ? नेताको आदेशमा फेक एन्काउन्टर गर्ने नेपाल प्रहरी, आफ्नै साथी प्रहरीलाई निर्ममता पूर्वक हत्या गर्ने लाई किन सक्दैन “एन्काउन्टर” गर्न? के ले रोकेको छ उस्लाई ? आज तिनै हत्यारा, बलात्कारी, बैंकदेखि जनताको घर लुट्ने लुटेराहरुलाई प्रहरीले सुरक्षा दिनु पर्ने, स्यालुट हान्नु पर्ने वाध्यता किन छ? के परिवर्तन भनेको देशको जनता मार्नलाई र केही व्यक्तिहरुले सत्ता र सम्पत्ति हडप्नलाई मात्रै गरिएको थियो? यो सबैमा जनताको जीउधनको सुरक्षा कता छ? जनताको नैसर्गिक अधिकार शिक्षा, स्वास्थ, र सुरक्षा कता छ? कानून र न्याय व्यवस्था खोइ कता छ?
प्रहरी भनेको कानून बोक्ने संस्था हो। जनताको रक्षक हो, राष्ट्रसेवक हो। प्रहरी सङ्ग अपार शक्ति छ र यो संस्था सङ्ग सरकार समेत डराउनु पर्ने हुन्छ किनकी प्रहरीले कानून र मर्यादा बोकेको हुन्छ। तर किन नेपालमा आज कानून सङ्ग नेता डराउदैन? किन आज जनता असुरक्षित छन? किन आज जनता को भरोशा प्रहरीबाट उठेको छ? किन प्रहरी कानून मुखी न भएर नेतामुखी भयो?
खोइ प्रहरीको अनुशासन र सत्य सेवा सुरक्षणम? आज तिनै हत्यारा र अपराधी, बलात्कारी अनी लुटेराहरुलाई बुट बजारेर स्यालुट गर्दा मनले मानेको छ ?सत्ता र कुर्सीको आडमा आफ्नै साथीहरुलाई बर्बरतापुर्बक मार्ने जनयुद्धका मतियारहरुलाई बुट बजारेर स्यालुट गर्दा मनले मानेको छ ? आफ्नै सिनियर अनी कलिगहरुलाई छेकी-छेकी, निर्ममतापुर्बक मार्नेहरुलाई बुट बजारेर स्यालुट गर्दा मनले मानेको छ?अझ कुर्सीमा बस्ने ले हतियार समेत खोसीदिएको अवस्थामा ति कुर्सीमा बस्ने नपुंसकहरुलाई Salute ठोक्नु पर्दा “इमान्दार” नेपाल प्रहरीको मनोबल गिरेको छ कि छैन ? जवाफ आँफै भित्र खोज्नु !
सिमित प्रहरीले अकुत सम्पत्ती कमाएको छ, भ्रष्टाचार गर्दा पनि नेताको छत्र छाया पाइएको छ भन्ने बित्तिकै समग्र प्रहरी संगठन सुदृढ भएको भने पक्कै छैन। नेपाल प्रहरीमा पनि इमान्दार र दक्ष प्रहरी पक्कै छन। उनिहरुको मनोबल गिराउने काम गर्नु प्रहरी संगठनकै लागि घातक हुन सक्छ। जनताले प्रहरी सङ्ग गरेको आश पक्कै पनि धमिल हुनु हुँदैन।
एउटी नाबालिकको बलात्कार र हत्या गर्नेलाई समात्न नसक्नु नेपाल प्रहरीको कम्जोरी हो कि नेताको आदेशको गुलाम हो नेपाल प्रहरी?हत्यारा, बलात्कारी, तस्कर, देशद्रोहीको सेवक हो कि राष्ट्रको, जनताको सेवक हो नेपाल प्रहरी ? नपुंसकहरुलाई सिधै गोली ठोक्न किन सक्दैन? आज आफ्नै साथीहरुको हत्या गर्नेलाई स्यालुट ठोक्ने प्रहरीले हामी निरिह जनतालाई के सुरक्षा देला र? आफ्नै संगठनका साथीहरुको रासनदेखि बुट, राइफल देखि वर्दीमा समेत कमिसन खाने प्रहरीले देशमा सुशासन कायम गर्न के योगदान देला ?
इमान्दार प्रहरीको कर्तब्य भनेको राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नु हो। अपराध र अपराधीलाई निर्मुल पार्नु हो। सक्छौ भने यि देश र जनताका दुश्मन लाई सफाया गरिदेउ होइन भने, वर्दी उतारेर बाबुराम, केपी, प्रचन्ड, माकुने, शेरबहादुर अनी हत्यारा, तस्कर, बलात्कारी र राजनैतीक दलका नेताहरुको गुलामी गर्नु, वर्दीमा सुहाएन। वर्दी खोलेर हिंड्नु अब नेपाल प्रहरीले अनी अवकाश पाएपछि आत्मबृतान्त लेख्नु !!
प्रकाशित मितिः शनिबार, पुस २१, २०७५ 1:29:18 AM |
PrevApple acknowledges demand for iPhones falling
Nextपहिलोपटक मदिरासम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा